Fa maninona no mangatsiaka be ny mpanjifan'ny ligiko? - Faq
Tena > Faq > Ny hatsiaka azon'ny mpanjifa ligy - ahoana no hamahana izany
Ny hatsiaka azon'ny mpanjifa ligy - ahoana no hamahana izany
Fa maninona no mangatsiaka be ny mpanjifan'ny ligiko?
Esory ary hametraka indray
Imbetsaka ny efijerymandryNy olana dia mety vokatry ny hadisoan'ny rakitra. ... Raha manana lesoka toy izany ianao dia esory ny famafanaLeague of legendsary ny fametrahana azy indray dia zavatra tokony hodinihina. Nomena izany, esorytptavy amin'ny mpamosavy Windows, ampidino indray ilay Launcher ary apetaho indray.7 fév. 2021
Manao ahoana daholo! Ity lahatsoratra ity dia mampiseho anao ny fomba firaketana mozika hilalaovana amin'ny radio radio, CD / DVD player, sound system na fitaovana hafa. Ny karazana dia miankina amin'ny fandraisam-peo ny haino aman-jery sy ny rakitra fanohanana ny endriky ny fitaovana. Dia mila fahaiza-manao manokana mba hahita izay fitaovana haino aman-jery ny fanohanana.
Ny olon-drehetra dia afaka milaza amin'ny kapila CD avy amin'ny seranan-tsambo USB na karatra SD. Ny firaketana an-tsoratra raki-daza amin'ny USB fiara na SD fitadidiana karatra: • Connect azy ireo ao amin'ny solosaina • Open azy in My Computer na ity PC fampirimana (arakaraka ny dikan-Windows mampiasa) Tadiavo ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra hanokatra izany PC in Windows 8/10 ao amin'ny Description: • ary mandika ny antontan-taratasy avy amin'ny solosaina ho amin'ny USB fiara na karatra fitadidiana, toy ny ataonao amin'ny lahatahiry rehetra. Aleo manana anaran'ny fisie mozika amin'ny litera latina.
Matetika ny stereo fiara dia manana olana amin'ny karazana litera hafa. Ny hany zavatra mba handinika rehefa mozika tsoratra amin'ny USB fiara na karatra fitadidiana dia ny haino aman-jery sy ny haben'ny rakitra endrika rafitra. Ohatra, ny audiosiona fiara sasany dia mety tsy mandeha amin'ny haino aman-jery Remo ahafahany lehibe mihoatra ny 4 na 8 Gb.
Lafiny manan-danja iray hafa dia ny endrika na ny antontan-taratasy rafitra ny haino aman-jery. Ny endrika mety indrindra amin'ny radio fiara dia FAT32. Mba jereo izao: • Connect ny fitaovana ho amin'ny solosaina sy mahitsy Tsindrio eo amboniny • Select Properties sy manantena ny endrika ao amin'ny 'File System' tsipika • Raha hanova izany, endrika fotsiny ny USB fiara ao FAT32.You afaka mijery lahatsoratra iray hafa ao amin'ny ny fantsonay hahitanao ny fomba hanaovana izany ary hianaranao ihany koa ny famahana ny olana raha toa ka tsy mandeha amin'ny radio radio, TV, boaty set-top, fakan-tsary na fakan-tsary fakan-tsary ny kapila USB.
Omeko ny rohy ao amin'ilay famaritana: Mba handraisana mozika amina CD na DVD: • Ampidiro ao anaty drive optique-n'ny solo-sainanao izany. Raha afaka manoratra rakitra amin'ny kapila ianao dia tokony ho fitaovana fandraisam-peo ny kapila optikao. Izy io dia manana marika toy ny Compact Disc Rewritable na DVD Multi Recorder na DVD RW.
Mandritra izany fotoana izany, ny kapila CD mahazatra dia manana marika toy ny Compact Disc, Compact Disc Digital Audio, na DVD-ROM. • Sokafy ity PC ity ary kitiho ny kapila optika izay hampiseho ny Magicien Burning Disk Windows built-in. • Safidio ny safidy 'Miaraka amina mpilalao CD / DVD' • Manaraka • Misokatra ho fampirimana nozaraina ilay mpitatitra angona.
Hisintona ireo rakitra avy amin'ny solosainao mankany aminy toy ny ataonao amin'ny lahatahiry hafa. • Avy eo safidio ny 'Drive' avy amin'ny Tools '/' Finish burn process '• Ao amin'ny varavarankely misokatra, azonao atao ny manova ny anaran'ny kapila sy ny hafainganam-pandehan'ny firaketana. • Manaraka. • Safidio ny ao amin'ny varavarankely manaraka anao hifidy ny fandraisam-peo endrika: Data CD / DVD na peo CD - Raha toa ny fiara ny onjam-peo na fitaovana iray hafa dia afaka hiasa amin'ny mozika in MP3 endrika, dia afaka mampiasa ny Data CD / DVD safidy. - Raha toa ny fitaovana tsy manana MP3 na manohana endrika mozika hafa, ary afaka miasa afa-tsy amin'ny teny CD, mifidy ny CD Audio safidy.
Ny safidy fikarohana dia tsy miasa afa-tsy amin'ny CD! Holazaiko aminao bebe kokoa momba an'io avy eo. • Misafidy CD / DVD data aho. • Avy eo manomboka ny doro fandoroana Andraso mandra-pahavitany. • Vonona.
Voarakitra an-tsoratra izao ny kapila ary vonona hilalao. Te-hiverina any amin'ny mozika endrika kapila. Ny fomba fandraisam-peo vao notantaraina dia tsara ho an'ny mpilalao audio izay manohana ny filalaovana rakitra MP3 amin'ny CD na DVD. Na izany aza, misy fitaovana izay tsy manohana afa-tsy mozika amin'ny endrika audio.
Miankina amin'ny karazana haino aman-jery (CD na DVD), ny endrika mozika toy izany dia antsoina hoe CD audio na DVD-Audio. Ny endrika audio tohanan'ny fitaovanao dia ao amin'ny boky torolalana Vakio. Matetika dia tsy hita izy io.
Mba hanatsarana ny zava-misy, dia mametraka manokana mpanamboatra, fantatra eran-fanehoana an'ohatra eo amin'ny fitaovana mba milaza izay raki-peo sy ny lahatsoratra endrika hanohana ireo. Jereo àry izao ny audio an'ny fiaranao. Raha toa ka manohana mp3 izy dia manana marika toy izao: ho an'ny CD: ho an'ny DVD: ho an'ny CD audio: ho an'ny DVD-Audio: ho an'ny DVD-Video: ny CD audio iray dia afaka mampiasa ilay fiasa Windows voaorina ao anaty dia azo noforonina mitovy amin'ny anao hita teo aloha, fa mifidy ny CD Audio safidy.
Vokatr'izany dia toa izao ny disk floppy voarakitra ao anaty endrika CD audio: Niova ny anaran'ny fisie ary efa nanjary ny extension extension azy ireo ankehitriny .CDA. Afaka manana hatramin'ny 80. firaketana feo amin'ny minitra amin'ny CD audio ianao, fa amin'ny kalitao tsy voafehy kokoa noho ny mp3 te mozika avy amin'ny endrika tsy voafehy toa ny FLAC na WAVE amin'ny CD audio.
Fa afaka mampiasa mp3 koa ianao. Raha sendra izany, tsy azonao atao ny mandika fotsiny ireo rakitra amin'ny CD audio toy izany amin'ny solo-sainanao ary milalao azy ireo raha tsy ampidirinao ao anaty floppy disk - fampahalalana momba ny làlana fotsiny no ao anatiny, fa tsy misy angona. Inona no hatao raha toa ianao manoratra mozika avy amina CD audio Raha te-handika CD amin'ny solosaina na kapila USB ianao dia azonao atao izany amin'ny fampiharana ny antoko fahatelo toy ny Ashampoo Burning Studio FREE.
Ny rohy mankany amin'ny pejy fandraisana dia hita ao amin'ny famaritana: Ka andao ary. • Atsofohy ao anaty solosainao ny kapila audio iray ary atombohy Ashampoo Burning Studio MAIMAIMPOANA • Fidio ny mozika / Rip Audio CD • Hizaha ny kapila audio ny programa • Safidio ny fisafidianana ireo làlana tianao hivadika amin'ny fikandrana manaraka. Afaka mifidy rehetra, na ny vitsy.
Raha ny anaran 'ny lalamby dia tsy aseho toy ny amin'ny raharaha, dia afaka milalao dian-tongotra amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra iray mifanaraka mifidy izay ilainao. • Manaraka. • Ao amin'ny fikandrana manaraka, farito ny folder izay tokony hamonjy ireo rakitra. amboary ny endriny sy ny codecs (ovay ny bitrate) mba hiova fo ireo rakitra. • Rehefa avy tsindrio ny bokotra fanombohana fanombohana dia hanomboka ny fizotrany ary hivadika ho an'ireo fampirimana nofidinao ireo rakitra. • izao dia afaka mihaino ny PC na mandefa azy ireo amin'ny USB fiara.
Na izany aza, tsy afaka mandrakitra DVD-Audio amin'ny fampiasana fitaovana natsangana Windows ianao. Mba hanaovana izany dia mila fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo ianao. Tsy dia maro izy ireo ary mazàna no vidiana.
msvcp140.dll misintona microsoft
Na eo aza izany dia misy programa antsoina hoe Audio DVD Creator izay azonao atao ao anaty maody fitsapana mandritra ny 30 andro. Afaka mahita ny Download rohy ao amin'ny Description: Similar fandaharam-misy ary afaka mikaroka ny aterineto mba hianatra bebe kokoa momba ny famoronana ny DVD-Audio kapila: • fandefasana Audio DVD Mpamorona sy mifidy New Project • Mamorona peo DVD • Mampidira anarana ao amin'ny manaraka varavarankely ary farito ny endrika audio. Izaho tsy hiala amin'ny safidy ny faneva. • Tandremo manokana ny safidin'ny fahitalavitra.
Misy roa amin'izy ireo: NTSC (Etazonia, Kanada, Japon) ary PAL (Eoropa, Hafa) Misy rafitra rafitra fanaovana loko telo lehibe - PAL (Eropa), SECAM (Union Sovietika teo aloha), NTSC (USA, Japan, sns.) . Ka ny mpilalao DVD amin'ny fiara sasany dia tsy afaka miasa afa-tsy amin'ny kapila NTSC - mazàna dia fiara amerikana na japoney ireo.
Fa eoropeanina fiara, ny marina dia Pal karazana. Raha manoratra DVD amina endrika diso ianao dia tsy mandeha izany. Na izany aza, kapila DVD-Audio sy DVD-Video ihany ireo.
Aza manadino. • Manaraka. • Ao amin'ny fikandrana manaraka, ampio rakitra ho may amin'ny DVD audio.
Azonao atao ny manampy CD misy audio na rakitra mozika avy amin'ny kapila mangirana ao amin'ny solo-sainao. • Safidio ny fampirimana sy ny fisie. Na ampio ny lahatahiry manontolo. • Ok • Next. • Manaraka. • Safidio raha hamonjy mozika ao anaty kapila floppy na kapila mafy • ary kitiho raha manomboka. • Noho izany, ny kapila DVD teny voarakitra ao amin'ny tarehiny endrika toy izao: Raha ny mozika avy amin'ny teny DVD amin'ny solosaina na USB fiara eo mp3, dia afaka hanao izany miaraka amin'ny antoko fahatelo rindrambaiko ihany koa.
Ohatra Movavi Converter, izay nolazaiko tao amin'ny iray tamin'ireo lahatsoratra teo aloha mba hilalaovana rakitra FLAC, AVI, MKV, XVID, WMV, 3GP, FLV amin'ny IPhone, IPad na IOs -. Tadiavo ny rohy mankamin'ny lahatsoratra sy ny pejin-tranonkala amin'ny programa amin'ny famaritana: Noho izany, andao hanomboka • Ampidiro ao anaty kapila ny DVD audio ary atombohy Movavi Converter • Safidio ny Add Media / Add DVD • Ary ampidiro • Ny varavarankely lehibe dia mampiseho anao ny lisitra ny lalana. • hankany an-Audio kiheba sy mifidy ny endrika tianao hampiova finoana ny raki-peo DVD ho any. • Farito ny folder raha te hitahiry ireo fisie. • Click Niova fo. • rehefa afaka izany, ny dingana rehefa manomboka, ary ny raki-peo DVD dia niova fo tao amin'ny fampirimana anao ireo.
Te-hilaza teny vitsivitsy momba ny fitendrena mozika amin'ny stereo fiara, rafitra fanamafisam-peo na fitaovana hafa aho raha manana finday avo lenta na fitaovana finday hafa ianao. Misy fomba maro hihainoana mozika avy amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny radio radio na mpilalao hafa. Ao rehetra, ny fanamafisam-peo na onjam-peo ny fiara ihany no manao toy ny fanamafisam-peo.
Ampifandraiso fotsiny izy ireo amin'ny finday avo lenta izay itehirizana ny làlana. Arakaraka ny dikan sy modely ny fiara onjam-peo, dia afaka mampifandray ny finday avo lenta na tablette PC ao amin'ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto. • Via AUX.
Tsy mila faritra manokana amin'ny radio fiara na mpilalao hafa ianao hampifandray telefaona amin'ny alàlan'ny fifandraisana AUX. Mila mampiasa fitaovana Fampifandraisana roa miaraka amin'ny tariby AUX (tariby audio) fotsiny ianao. Ampidiro ao anaty jack headphone an'ny findainao ny tariby ary ampidiro ao amin'ny port AUX an'ny radio fiara, izay matetika no eo aloha no misy azy. • Amin'ny alàlan'ny USB.
Mampifandray ny telefaonina ho an'ny onjam-peo fiara Toy izany koa amin'ny USB tariby. Ny hany tokana Ny tsy fitoviana dia amin'ny karazana seranana ampiasaina - amin'ity tranga ity dia port USB izy ireo. Na izany aza, ny stereo fiara sasany dia tsy manohana an'ity fifandraisana ity. • Amin'ny alàlan'ny Bluetooth.
Ny fampifandraisana finday smartphone amin'ny radio amin'ny alàlan'ny Bluetooth dia sarotra kokoa noho ny fifandraisana misy tariby. Mba hanorina Wireless tambajotra, mitodika amin'ny Bluetooth roa fitaovana ary avy eo mitady ny tambajotra eo amin'ny finday avo lenta. Aorian'ny fisehoan'ny radio-nao ao anaty lisitry ny fitaovana hita, ampifandraiso ireo fitaovana.
Na manao ahoana na manao ahoana ny traikefanao, tsara kokoa ny manamarina ny boky torolàlana momba ny onjam-peonao. Tokony hanampy anao hanangana fifandraisana Bluetooth izy io - raha toa ka manohana an'io fiasa io ny radio amin'ny fiaranao. Tsidiho ny fantsonay hijerena lahatsoratra amin'ny fisintomana sy fihainoana mozika amin'ny fitaovana Android na iOS (finday avo lenta na takelaka); Araho ny rohy ao amin'ilay famaritana: Ahoana ny fomba fampidinana sy fihainoana mozika amin'ny telefaona Android, mpitendry mozika mahasoa Ahoana ny fomba fampidinana ireo rakitra FLAC, AVI, MKV, XVID, WMV, 3GP, FLV amin'ny IPhone, IPad na milalao IOs.
Izay ihany aloha. Raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity dia kitiho ny bokotra 'Like' etsy ambany ary misoratra anarana amin'ny fantsonay hahitanao misimisy kokoa. Mametraha fanontaniana amin'ny hevitrao.
Misaotra anao nijery. Vintana betsaka.
Fa maninona no ratsy be ny mpanjifa ligy?
Izany dia midika hoe nahazoKOAbibikely maro,KOAbetsaka ny lag (indrindra amin'ny champ select), ary olana maro karazana toy ny fivoahan'ny fahatsiarovana, fianjerana, fihenan-tsasatra, sns. Nanolo-tena izahay hanao zavatra momba nympanjifataloha, nefa mbola misy olana.2 mart 2020
kaody hadisoana 0x803fa067
League of Legends dia lalao tsy mendrika. Ratsy izany. Ratsy tanjona.
Raha tsy mitovy ny eritreritrao dia donto tsy mahalala fomba ianao FA fantatro izay eritreretinao Hey Darkkmane Raha ratsy ny ligy dia maninona no be ny olona milalao? Ry vahoaka, maro ny olona milalao satria maro ny olona DISO, ny hany antony mahatonga ny League of Legends hanana mpilalao 67 tapitrisa isam-bolana dia satria ny Riot Games dia mamoaka hoditra foana mba hanadalana! Ivelan'ny League of Legends lalao GOALY, hohazavaiko tsara ny antony maha ratsy azy - tena inona no tsy mety amin'ny League of Legends, koa raha miasa ho an'ny Riot, Gamesuh ny olona rehetra any, dia raiso an-tsoratra ry malala satria torohevitra tsara izany I saika hanome aho, okay? Ary ny lalaoo maty izany. Mety? Lalao efa ho faty io. Aleo atrehana fa tsy ny lalao lahatsoratra malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao akory, Eny, tiako holazaina, noho ny Fork Knight, ny League of Legends izao dia ilay lahatsoratra lahatsoratra ENY FITIAVANA be indrindra eran'izao tontolo izao.
Tena menatra mpandatsa-drà. Maty milalao adala. Mandehana any amin'ny Afobe. * Fahagagana * Fa aza matahotra, lehilahy amin'ny Internet aho nefa tsy manana traikefa amin'ny famolavolana lalao, noho izany dia mahay kokoa aho manamboatra ny lalao noho ianao.
Ka henoy fotsiny izao alohan'ny hanombohako. Raha tokony hitaraina momba ny lalao ianao, tsy azonao atao ve ny mijanona tsy milalao League of Legends fotsiny fa miroso amin'ny lalao hafa ankafizinao kokoa? TSIA, mankafy ny hatezerako aho. Ary koa, nandany dolara an-tsokosoko tamin'ity lalao ity aho mba hividianana hoditra.
Be loatra ny lalana, ka mihidy aho. Dia tsy mahazo ary tsy hanao izany mihitsy. Andriamanitra ô.
Na izany aza, aoka ny mahazo ny olana laharana voalohany nivory voalohany olana amin'ny Fikambanam-Legends misy ifandraisany amin'ny lisitra, ary tamim-pahatsorana aho nahagaga tsy nisy voalaza izany satria raha vao hijery ny Fikambanam-Legends lisitra indray mandeha, ny olana tokony mahazo mazava tsara tarehy nivory, dia misy fomba maro koa endri-tsoratra. Ahoana no ahafahanao manantena ny lehilahy hahatadidy ireo toetra amam-panahy rehetra ireo? Araka ny siansa, ny atidohan'ny olombelona ihany mahatsiaro hatramin'ny zavatra telo mahery vaika zavatra telo kohaka ary manantena ny olona mba hahatsiaro 140 tapitrisa tarehin-tsoratra!? Mampihomehy, ary ankoatr'izay, maro amin'ireo olona ireo no manana olana manjelanjelatra izay tsy mahafinaritra lalaovin'ny LENS, ka mazava ho azy fa ny dingana voalohany nataoko tamin'ny fikolokoloana ny League of Legends dia ny fanapahana ny lisitra, ankehitriny dia mipetraka ny fanontaniana: Iza no mijanona ary iza no mandeha ? Hesorinay daholo ireo tompon-daka ratsy rehetra ao amin'ny League of Legends, raha manao izany isika, ny ligy dia ho lalao tsaratsara kokoa! Voalohany indrindra, hanala ireo mpamono olona izahay. Tsy dia tiako hovonoina haingana.
Avelao aho hiaina azy io! Avy eo manala tanky izahay! Tsy tiako maka fa ela mba hamono olona iray. Avelao aho hamono azy haingana, indrisy! Ary rehefa afaka izany dia hanaisotra ny fanohanana. Noho izany assholes ireo intsony ry zareo mitaraina fa underrated.
Avy eo dia hesorinay daholo ny tompon-daka amin'ny biby, tsy biby aho. Lehilahy aho! Fa maninona aho no te hilalao biby? TE-hilalao lehilahy aho! Manaraka, ndao esorina daholo ny tompon-daka amin'ny zaza. Ity lalao ity dia isaina ho an'ny tanora T, fa tsy ho an'ny zazakely.
Mialà eto. Ary tsia, tsy afaka mampiasa izany fialantsiny izany ianao. Dia mbola handeha ho any am-ponja! Esorinay ny tompon-daka izay mampiasa fitaovam-piadiana satria mahery setra loatra! Tompondaka mampiasa sabatra satria mahery setra loatra! Champions izay mampiasa famaky satria be loatra ny herisetra! Tompondaka izay manana mozika ankafizina satria be loatra ny lokanga! Tompondaka mifandraika amin'ny vorona, vorona manadala! Tompondaka izay tena kely! Fuck olona hiala eto. manafintohina sombin-javatra madinidinika izay manomboka amin'ny litera V ny anarany! Taratasy ratsy.
Tompondaka izay mampiasa lefona satria fisaka fotsiny izy ireo fa tsy baolina! Tompondaka izay ny anarany dia: marika, diana, ezreal, illaoi, irelia! Tompondaka izay manana fandrika! Tompon-daka amin'ny endrika maro! kai'sa satria tsara izy! ivern satria tena minono izy! Fiddlesticks satria mampatahotra loatra izy! Udyr satria be volo loatra. yorick satria tiany raha mamboatra faty halevina! ary jax satria afaka mitondra ny lalao ary maro be ny fahasimbana ary tsara kokoa very tao amin'ny mozika Rehefa manana azy io. Aleo aza avela hiala aminy.
IRAY IHANY NO AZONAO Tifitifitra, Lee Sin. Fa i Lee Sin izao, izao misy tompon-daka mahay mandanjalanja, DISTANT izy! Tompondaka miafina! Tompondaka mitora-bato! Champions avoakany Cards! Masters manipy baolina! Jarvan IV, satria tsara kokoa ny telo voalohany! Urgot satria manana tongotra manambitana be loatra! Kodiarana izay satria fucking maty! Kog'Maw! Malzahar! Sivir! Xerath! Zillean! Mordekaiser! Camille, Karthus, Yoshi, Donkey Kong, This Guy, WarioTom Clancy, UBISOFT! Ary noho izany dia manana tarehin-tsoratra ratsy rehetra nesorina tamin'ity lalao ity isika litera telo fotsiny! Gragas, Ashe ary Aurelion sol, ny fitambaran'ireto tarehin-tsoratra telo ireto dia mahatonga ny filaharana tonga lafatra ary mandika koa amin'ny asa fivarotana hoditra an'i Riot - manana an'i Gragas izahay mba hahafahan'ireo tovovavy hisintaka, Ashe mba hahafahan'ireo bandy miala, ary Aurelion Sol ho an'ireo marary marary any! Mino aho fa zava-dehibe ireo tarehin-tsoratra ireo mba hahatonga ny League of Legends ho lalao mety tsara ary afaka mandeha any amin'ny helo ny olon-drehetra * MITSANGATRA NY FAHATONANA * Ka noho isika manana an'ity zava-drehetra ity amin'ny lalao, dia endri-tsoratra ratsy sy tsy ilaina izany, fotoana tokony hijerena ny sari-tany misy ny sisa amin'ireo tarehin-tsoratra - izao tsara izao sarintany, fa tsy mahavariana. Fantatrao fa mety hampiasa tweaking vitsivitsy izy io.
Eny, tiako ny nataon'izy ireo tamin'ny maintso eto an-tany, heveriko fa ahitra no iantsoana azy. Tsara be izy io, saingy tsy dia mora ny mifandray satria fantatrao fa tsy tena izy ny ahidratsy. Fantatrao ve anefa izay tena? Tranobe.
Noho izany aho dia namely nanao hoe: trano goavana eo afovoan'ny ny sarintany, ianao mahalala angamba toy ny karazana lapan'ny mpanjaka. Hainao ny tiako hambara? Ny olon-drehetra dia tia lapa, izay hanatsara ny lalao amin'ny tapitrisa isan-jato. Ary ny olana isan'ny telo, ny mpilalao ankehitriny ny zava-nitranga, ny zavatra ratsy indrindra mikasika ny Fikambanam-Legends dia ny olona izay milalao ao anaty aterineto ity lalao ity, dia nanapa-kevitra tanteraka ny rehetra kinendry Esory! tsy misy afa-tsy olona iray - ianao! Lalao mpilalao tokana izao, izay mitondra ahy amin'ny olan'ny olana fahefatra efatra, tantara satria fantatrao fa mila lalao tsara ny lalao tokan-tena rehetra.
Ary ho an'ity lalao ity dia nieritreritra aho fa mety ho tantara mahafinaritra izany, tsy haiko, angamba Aurelion Sol, ilay dragona dia naka an-keriny an'i Ashe, ilay mpilalao andriambavy ary avy eo dia tsy maintsy nankany amin'ny lapa i Gragas ary namonjy azy, hitanao? fa tsy tsy misy lobaka. Fahavetavetana ity mety tsy maintsy manarona akanjo lava sy satroka kely an'ity lehilahy ity aho, inoako fa tsy fantatro ary avy eo rehefa miditra ny trano mimanda izy dia afaka mandeha any amin'ireto efitrano misy sary ireto azony mitsambikina ary isaky ny mitsambikina angamba mandeha tsy haiko ny mamaky riffing fantatrao fotsiny ary aorian'izay dia manampy mozika jazz mahafinaritra any aoriana fotsiny izahay ary badabop boom pow ry zalahy. Nahavita izahay! Ankehitriny dia manana tsy miangatra mifototra amin'ny lalao tsara ny hevitro! Taorinan'ireo fanovana rehetra narosoko ireo, ny League of Legends dia lalao tiako izao ary izay no tena zava-dehibe amiko.
Ka farany, Lalao Riot, tongasoa ianao. Tsara izany, izao dia fantatrao izay tokony hatao, fantatrao izany, eny, antenaiko fa ireo fanovana ireo dia hatao amin'ny alatsinainy herinandro, izay rehefa naseho aho fa nila nanatsara ny Overwatch i Blizzard tamin'ny alàlan'ny fampidirana ireo tarehintsoratra rehetra ao anaty 16-bit -Ny loko plastika dia nanova biby izay mihazakazaka haingana ary manangona ireo peratra ireo
Ahoana no fomba hanitiko ny mpanjifako LOL?
Ampiasao nyFanamboarana ny ligin'ny legendafitaovanafanamboaranany rakitrao lalao.
Sokafy nyLeague of Legends Launcher.
Tsindrio ny bokotra Gear hanokatra ny Settings sakafo.
Tsindrio ny 'fanamboarana'Bokotra. nyfanamboaranamaharitra 30-60 minitra ny fizotrany.
Fa maninona no mitohy ny fianjerako ny League of Legends?
Ny rafitry ny fandidiana misy anao dia lany andro ary mila havaozina. Mila havaozina ny DirectX. Misy rakitra lalao maloto. Misy ny fizotrany tsy ilaina izay mihatra amin'ny lalao.6 Okt 2020
Salama ry malala, miarahaba antsika indray ary anio dia mampiseho fomba haingana kokoa hanamboarana ny kiraro fitsangatsanganana sary Nvidia rehetra izahay. Angamba tsotra nefa tena nahomby hatrany ny zava-nitranga dia voakasika, dia azo manify ny ankamaroan'ny sary Travel kiraro aoka isika hanomboka mba te ho any amin'io tranonkala sy maka izany fitaovana izany tanteraka maimaim-poana sy tsy misy loatra ny tahotra. Antsoina hoe mpamily fampisehoana sy installer na ddu izy io afaka manaisotra ny sary.
Afaka esorina tanteraka izany nefa tsy mamela rakitra tokana ary izany no tadiavinay. Mba hahazoana ny mpamily mety amin'ny karatrao avy amin'ny loharano ofisialy, mety ho toa kely ny dingana iray, nefa minoa ahy, mety ho fanitsiana olana izany ary izany no teboka, raha manoratsoratra ilay tranokala ianao ary tsindrio ny iray amin'ireto rohy ireto dia manomboka izany misintona rakitra mandeha ho azy, te-misintona ary mankany amin'ny toerana fampidinana aho satria manaiky ny fisie zip ka mila manindry fanampiny isika hanesorana azy. Tsindrio fotsiny ny fisie zip dia safidio hongotana eto ilay rakitra fa izao dia mila mankany amin'ny ddu ianao rakitra tsara avy eo tsindrio eto Select nalaina indray ity foana dia tsy hahita ny fampirimana vaovao antsoina hoe Edu ary ho hitanao ny fampisehoana ny installer mpamily TXE ao amin'ny Inside fa A Portable Fitaovana ka tsy Install izany hampiasa azy io. Na izany aza, rehefa vonona ny hanomboka ny fizotrany ianao dia mila mametraka ny Windows 10 ao amin'ny Safe Mode mialoha ho an'ny valiny mety indrindra.
Raha mampiasa kinova taloha an'ny Windows ianao, dia azonao atao google fotsiny ny mandefasa boot raha te hitahiry bebe kokoa ao aminy ny kinova Windows iray izay miseho miaraka amin'ny Windows 10 amin'izao fotoana izao, koa andao tohizana amin'ny fomba azo antoka mangetaheta, mandehana amin'ny asterisk ary kitiho ny ny fikandrana kisarisary dia manokatra ny fikandrana fikandrana izao hitety ny hanavao sy ny fanarenana ny fiarovana izao tsindrio restart izao eo ambanin'ny kiheba mandroso izao dia ho hitantsika ireo safidy ireo, ka mizaha amin'ny fikaroham-bahaolana ny safidy mandroso ary tsindrio raha hijery safidy azo sitrana bebe kokoa ary safidio ny safidy ho an'ny fanombohana apetrakao ary kitiho ny famerenana izao, miandry ny kintana B kely ary inona ny y ho hitanao ireo safidy ireo, isa 4 ao amin'ny fitendry anao izay mampihetsika ny kilema azo antoka ary hitondra anao eo am-baravarankely. Mitsitsia firaka bebe kokoa amin'ny fotoana fohy. Ampidiro ny tenimiafinao, ary midira ao an-solosaina.
Raha vantany vao nanapa-kevitra ianao fa afaka mandeha amin'ny toerana tsy misy ny DD na mpamily fampisehoana mpampiditra iray ary mampandeha ny mpamily fampisehoana ary mametraka famaky ankehitriny dia manokatra ity varavarankely ity izahay satria hitanao fa efa neken'ny karatra sary nataoko izany fantatro fa nifidy aho ny safidy Nvidia eto. Azoko atao ny milaza aminao fa alao antoka fa nifidy ny safidy Nvidia teto ianao mba hahazoana antoka fa a Raha nanapa-kevitra ianao fa ny tokony hataonao dia tsindrio ity bokotra madio sy hamerenana ity, io ihany no safidy tokana sy tsara indrindra, hanesorana tanteraka ireo sary avy amin'ny solosainao tsy misy sisa. Mandrosoa ary tsindrio eo amboniny mba hanombohana ho azy ny solosaina avy amin'ny Safe Mode mankany amin'ny fiorenanao Windows mahazatra.
Mazava ho azy, amin'ny solosainao dia tsy ho hitanao ny fampirantianao, azafady toy ny teo aloha, satria nesorina izy ary mandeha tanteraka ny sary Ankehitriny dia mila mpamily Nvidiagraphics farany ho an'ny karatra sary manokana ianao ary raha vao apetraka dia i Hobbit no hamaha ny olana. Ka avelao aho handeha hamaky anao. Misy fomba roa ahazoana ireo mpamily ho an'ny Nvidia, raha fantatrao ny maodely na ny antsipirian'ny karazan-tsarinao, ary afaka mandeha amin'ity pejy ity ianao ary mifidy ny vokatra serial an'ny karatra misy anao ary misafidy rafitra miasa ary farany ny fiteny ankehitriny isika dia hahita ny farany nivezivezy noho ny manokana Graphics karatra dia tsindrio eo amin'ny Download ary izany no izy, raha tsy fantatrao dia misy dia mora kokoa ny lalana, vao mandeha any tranonkala ity ary dia banjino ny rafitra fitaovana ho azy ary mety avy hatrany mamaritra izay Nvidia mampiasa karatra.
Vantany vao vita izany, dia haseho anao ny bokotra Download izay ahafahanao misintona ny dia farany ho an'ny karatra sary Nvidia izay midradradradra ao amin'ny famaritana lahatsoratra ho an'ireo tranonkala roa ireo Mametraha ny mpamily amin'ny fanarahana ny torolàlana eo amin'ny efijery ary avereno PC Rehefa vita ny fizotrany izao dia manantena aho fa ny olan'ny mpamily dia raikitra amin'izao fotoana izao, raha nanampy anao azafady mba ampahafantaro ahy amin'ny hevitra etsy ambany. Tiako raha tianao izany raha tianao izany ary misoratra anarana amin'ilay fantsona hahitanao bebe kokoa. Ity no mpampiantrano anao, Marathi avy amin'ny geekstutorial iray hafa
Nahoana ny Fikambanam-Legends mpanjifa hatsiaka mandrakariva?
Ny fifanakalozan-kevitra momba ny mpanjifa ligy dia tsy mitsahatra mangatsiaka ao anaty champ select ao anatin'ny ligin'ny ligin'ny Legends Legends amin'ny sokajy Lalao malaza. Efa nanana olana vitsivitsy tamin'ity mpanjifa ity aho, saingy vao mainka niharatsy ..
miadana ny backspace
Nahoana i Ligy mpanjifa mandry taorian'ny lalao rehetra?
Tsy tokony ho 1 ihany ireo, ary ny 2 avy ny maizina manga iray. Te mba hamaranana asa eo amin'ny mazava manga iray. Raha vao ianao hamono azy ny mpanjifa dia tokony unfreeze Ary raha noho ny antony izany doesnt dia hizaha na dia mihazakazaka amin'ny antsipiriany ihany koa. mibontsina, mandetika koa ny rindranasa hafa raha mihamangatsiaka
Inona no hatao raha mangatsiaka ny mpanjifanao amin'ny safidin'ny tompon-daka?
Ny dingana mitovy amin'izany dia antsoina hoe 'LeagueClientUx Helper'. Ho an'ireo mirona amin'ny lafiny teknika, azonao atao ny manamboatra script hamerenana indray ny fizotrany (mandeha ho azy (tsy mila manokatra maso ny hetsika) amin'ny ezaka kely (ho an'ny mac ihany): Mamorona rakitra an-tsoratra tsotra (miafara amin'ny .txt, tsy misy format).
Ahoana ny fanamboarana ny lagin'ny mpanjifa League of Legends?
Dingana 1: tsindrio ny bokotra Windows logo sy R amin'ny fotoana mitovy amin'ny klavinao. Ity dia hanokatra ny boaty fifampiresahana Run. Soraty ny tontonana fanaraha-maso ary ampidiro ny fidirana. Dingana 2: Te hanitatra ny fomba fijery ianao amin'ny: ary tsindrio ny Sokajy. Manaraka, tsindrio System sy Security. Dingana 4: tsindrio ny rafitry ny rafitra mandroso, izay hita eo amin'ny pane ankavia.